Usati watana mumwe munhu kutenga kana kutengesa zvinhu mumatengesi ekutengesa, verenga izvi: - TELES RELAY
HOME » kambani Usati watana mumwe munhu kutenga kana kutengesa zvinhu mumatengesi ekutengesa, verenga izvi:
Mapurisa mazhinji munyika muno anobvumira kuti mazano avo ashandiswe pakutengeserana kwakadaro. The Fort Worth Police Service muTexas, somuenzaniso, iri kuratidza kushandiswa kwezvivako zvayo munzvimbo dzakasiyana panguva dzebhizimisi. Usaunza zvombo, anodaro.
Muguta reSmirna, Georgia, dhipatimendi remapurisa rakadana kushanda "Operation Safe Sale". Inopa 24 yokupaka kana maawa 24 maawa, uye vatengesi kana vatengi vanogonawo kukumbira kuvapo kwevatengi panguva yekutengesa, inoratidza guta racho .
MuWostostock, Georgia, vatengi kana vatengesi vanogona kugadzirisa musangano muimba yekuchengetedza kana pamotokari yedhipatimendi remapurisa uye kukumbira mujeri kuti apinde mutengesi. Inopawo nhamba yekufonera kuti irongedze anoshanda nokuda kwekutengesa mushure mekugara kwenguva yakareba.
Unogonawo kushandisa mapoka emotokari akasarudzwa
Mukuwedzera kune masuo ekupinda, dzimwe nzvimbo dzemapurisa dzinobvumira vagari kushandisa vagari vemotokari dzavo se "nzvimbo dzekutengesa paInternet". Mumwe wavo ndiro guta reIowa, Iowa.
"Kuendesa zvinhu izvi muhofisi yemapurisa yekupaka kunowedzera njodzi inogona kuitirwa mutengesi kana mhuri yake uye pfuma yavo, pamwe chete nekukwanisa kwekutsinhanisa mari," Ankeny Town anoti pa webhusaiti yake.
Guta haribvumi vatengesi nevatengi kuti vachengetedze zvinhu zvakadai mumatare emapurisa kana pamusasa wekupaka. Asi izvi zvinobvumira mutengesi wezvinhu zvakakura semotokari kana kushambidzika kwemashanga panzvimbo yavo yokupaka.
"Uyezve, nzvimbo iyi inogona kushandiswa sepakachengeteka uye isina nzvimbo kuti vabereki vauye kuzoungana kutarisira vana," akadaro guta racho.
MuGeorgia, hofisi yeDouglas County Sheriff inewo nzvimbo yekupaka uye zviratidzo zvine nhamba yefoni kuti inoshe kana iwe uchida kuti nhengo yeParamende iuye nekukusunga iwe. Kunyange zvazvo vatevedzeri vake vasingatarisiri kutengesa, nzvimbo dzakasarudzwa dzokupaka dziri pasi pekuona mavhidhiyo, akadaro office.
"Chikoro =" media_image "src =" http://cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/190517021247-file-douglas-county-sheriff-large-169.jpg "/>
Agent anogona kuona kana zvinhu zvakabiwa
Kuedza hakusi kwekugadzirisa kuchengetedza kwevatengi nevatengesi.
MuSmirna, mapurisa anogona kutarisa zvinhu zvakatengeswa vasati vapera mutengesi kuti vaone kana vakarasika kana kubiwa, rinodaro guta pawebsite yake.
IWostostock Police Service inogonawo kutarisa nhamba dze serial dzeGeorgian uye yenyika yezvinhu zvekuchengetedzwa kwemashoko kuitira kuti zvive nechokwadi kuti hazvina kubiwa.
Haasi mapurisa ose anotarisa serial nhamba kuti aone kana zvinhu zvakatengeswa zvakabiwa. Dhipatimendi reFor Fort Worth Police, somuenzaniso, inoti izvi hazvisizvo nevakuru varo.
"Kana ukasarudza kusangana pamapurisa, ramba uchifunga kuti vashandi vomuguta vanowanzorambidzwa kubatanidzwa kana kupindira mune zvekutengeserana kwebhizimisi," rinodaro Dhipatimendi rePurisa yeMapurisa. Worth. "Mapurisa nevashandi vomunharaunda havangabatanidzi mukutengeserana uye havazobatsiri mutengesi nokutsanangura nhamba dze serial ona kana chimwe chinhu chave chave chakabirwa kana chakashaikwa. "
Dzimwe misika yemuInternet inosangana nzvimbo
Makambani akadai seApeerUp online marketplace vanobatana nemapurisa kuti vagadzire nzvimbo yakachengeteka yekuita bhizinesi. Vatengesi kana vatengi vanogona kuwana nzvimbo iri pedyo nekuisa maadiresi avo pawebsite yavo kana purogiramu.
"Mavara aya akajeka uye ane vhidhiyo kamera. Iko nzvimbo inobatsira yekusangana yekuongorora nyaya uye kugumisa kutengesa, "anodaro OfferUp pawebsite yake. Kamera munzvimbo idzi dzinotora maawa 24 pa 24 uye rekodha mavhidhiyo mavhidhiyo anowanikwa mapurisa.
Sezvimwe chikamu chekuedza kwayo, OfferUp yakapa humwe hurokudziro kuvashambadzi kubva kuDhipatimendi reMapurisa reDallas gore rakapera pakuonekwa nekusungwa kwemapurisa. chiitiko chemhosva mumatengesi ekutengesa.
Agent anopa mamwe mazano uye nzvimbo dzekuungana  Munguva yekutengesa, vamiriri vanogona kupawo mamwe mazano.
Somuenzaniso, Smyrna vamiriri vanokurudzira avo vanobatanidzwa n mabasa ekudhura kuti aite mabasa avo munzvimbo yebhangi, uko mari inogona kugadziriswa panguva yekuendeswa kune imwe kana imwe yemapato.
Uye kana iwe usingafariri mapurisa, imwe nzvimbo ipi neipi yevanhu ichaita zvakanaka.
"Nguva dzose enda kunzvimbo yevanhu yakafanana neresitorendi kana mall, kana munzvimbo dzavanofamba nemotokari kana motokari dzemotokari. Usambosangana munzvimbo dziri kure, "akadaro Dhipatimendi rePurtual Police.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.cnn.com/2019/05/17/us/marlen-ochoa-safe-online-transactions-trnd/index.html
"Booth Vacheche 'vari nharo pane basa anoratidza